Igama elincinane igama kunye nemvelaphi
Incinci ibinzana elichazayo eliqhelekileyo linikezelwa kumntu owayengumfutshane okanye obuncinane, ukusuka kwiNgesi yesiNgesi kunye ne-Old English lytel , elithetha "encinci." Kwezinye iimeko inokuthi isetyenzisiwe isetyenzisiweyo ukubonisa ukuba omncinci wamadoda amabini elinye igama. I-KLEIN yi-variant yesiJamani kunye ne-PETIT yesiFrentshi.
Igama lomnye igama: I-LITTLE, LITEL, LITTELL, LITTLE, LYTEL, LYTELL, LYTTELLE, LITTELLE, LYTLE, LYTTLE
Kuphi kwihlabathi Ngaba abantu abanegama lomntu elingaphila?
Ngokwegama lokwabiwa kweedani ukusuka kwi-Forebears, encinci ibinzana eliqhelekileyo kwiindawo ezininzi eziNgesi, kuquka i-United States (apho i-276th), eNew Zealand (243rd), e-Australia (262nd), eScotland (256th), eNgilandi ( 331st) kunye neChanada (357th). Ngaphakathi kweNgilani, iNcinci ixhaphake kwiindawo ezikumantla, ikakhulukazi iCumberland apho i-11 eyona idlulileyo igama elidlulileyo.
I-WorldNames PublicProfiler ibonisa ukuba e-United Kingdom, iNcinci ibonakala kakhulu kwiCumbria County, eNgilandi; IDumfries kunye neGalway, eScotland; kunye neFermanagh, eNorthern Ireland. Ngaphakathi kweMntla Melika, iNcinci ixhaphake kakhulu eNova Scotia, kunye nase-United States yaseNorth Carolina naseMississippi.
Abantu abaPhezulu abanegama elide lokugqibela
ULee Henry Little - iMelika Yemfazwe yaseMelika i-Confederate brigadier jikelele
Malcolm Igama elincinci lokuzalwa likaMalcolm X, umlindi woluntu wamalungelo ase-Afrika
UArthur Dehon Unyanzelisi weekhemikhali encinane waseMelika
Umbhali uJean Little - waseCanada
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name LITTLE
Igama elincinane igama leDNA
Le projekthi yeDNA yaqalwa ngo-2001 kwaye ikhule ibe neqela elingaphezu kwama-300 ngamagama amaninzi, i-Klein, iKline, okanye i-Cline inomdla ekusebenzisaneni ngokubambisana ukuze kuhlanganiselwe uphando lolo lofuzo kunye novavanyo lwe-DNA ukuze kulungiswe imigudu yamancinci.
Igama lesiNgesi Iintsingiselo kunye neMvelaphi
Ukufumanisa intsingiselo yegama lakho lesiNgesi igama langoku kwesi sikhokelo kwisibongo sesiNgesi intsingiselo kunye nemvelaphi.
Indlela Yokuphanda I-Ancestry yesiNgesi
Funda indlela yokuphanda umthi wakho wesiNgesi ngesi sikhokelo kwiirekhodi zoobuhlanga eNgilani naseWales, kubandakanya ukuzalwa, umtshato, ukufa, ubalo lwabantu, imikhosi yempi kunye necawa.
Intambo encinci yentsapho - Akusikho into ocinga ngayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto into enjengokwintsapho encinci okanye ingubo yeengalo zeNqununu encinane. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
INKQUBO YENKQUBO YOMTHETHO WOKUBWELWA KWENKOSI
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba weNqununu encane ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho omncinci wokuzalwa.
Uhlobo loSapho - Ulwalamano oluthile
Hlola ngaphaya kwezigidi ezi-2.7 ezirekhodiweyo zembali ezikhankanya abantu abaneNyununu encinane, kunye nemithi yentsapho encinane kwi-intanethi kwiwebhusayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-GeneaNet - Iirekhodi ezincinane
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abaneNkqantozana encinci, ngokugxininisa kwiirekhodi kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
DistantCousin.com - INTSHOLONGWANE YONYAKA YONYAKA & Imbali Yentsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefalo zodidi lwegama lokugqibela elibizwa ngegama elincinci.
Umntwana Omncinci kunye nomNyango weNtsapho Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neengqungquthela kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela elincinane kwi-website ye-Genealogy Today.
I-JEFFERSON Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
Indlela yokuba ngumzobo weStater
Amakholwa kunye neZenzo zeCawa yePresbyterian
Iinqununu ezinhlanu eziPhambili zoPhuzo oluphezulu
Imfazwe Yehlabathi II: USS Idaho (BB-42)
Iingcaphuno zikaHenrik Ibsen zikaHedda Gabler
Imihla Yokuzimela kwiLatin America